Daalibaanka Afganistan oo ku goodiyay in uu laban laabayo dagaalka kadib dilkii Bin ladin. – SBC
Daalibaanka Afganistan oo ku goodiyay in uu laban laabayo dagaalka kadib dilkii Bin ladin.
Dowlada Afganistan ayaa sheegtay in ay ka hortagi doonto weerarkasta oo uga yimaada Daalibaanka Dalkaasi iyo weliba Ururka Al qacida kadib dilkii sheikh Usama Bin Ladin.
Afhayeen u hadlay Dowlada Afganistan ayaa sheegay in ay ka warqabaan in ay Daalibaanka qorshaynayaan weeraro cusub oo ay kusoo qaadaan xukuumada iyo weliba meelaha kale ee ay ku sugan yihiin Ciidamada shisheeye ee dalkaasi Afganistan.
Sidoo kale Afhayeenku waxaa uu xusay in uu jiro qorshayaal ay Dowladoodu uga hortagayso weeraro uga yimaada Daalibaan iyo Al qacida,iyadoona haatan uu jiro iskaashi dhinaca mukhaabaraadka ah oo ay kula jireen Dowladaha shisheeye ee ay Ciidamadu ka joogaan dalkaasi.
Hadalka sarkaalkan ayaa imaanaya xili maalintii shalay weeraro lagu qaaday Magaalada Qandahar,qabtoodna ay ahaayeen weeraro ismiidaamin ay sheegteen in ay ka dambeeyeen Ururka daalibaanka oo horay dalkaasi uga talin jiray.
Ma jirin bilihii aynu soo dhaafnay weeraro xoogan oo ay daalibaanku ka fuliyeen Afganistan,waxaana weerarada iyo weliba han jabaadyada ay imaanayaan maalmo yar kadib markii ay Maraykanku sheegeen in ay dileeen hogaamiyihii Al qacida Sheekh Usama Bin ladin.